ရထားများနှင့်ခရီးသွားလာရေးဘလော့ဂ်အချက်များ, အကြံပြုချက်များနှင့်ချွေတာသုံးစွဲ | တစ်ဦးကရထား Save
အားဖြင့် Paulina Zhukov
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပသို့မည်သည့်ခရီးစဉ်မဆိုအတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံပြုချက်များပါသောမရေမတွက်နိုင်သောလမ်းညွှန်စာအုပ်များရှိပါသည်, နှင့်ခရီးသွားမဆိုအမျိုးအစား. ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်များသည်သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာရန်အလွန်ကောင်းပါသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကဥရောပရဲ့အတွင်းပိုင်းအကြံပေးချက်များအကြောင်းကိုသင်ပြောပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်ဟာစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုပါ…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ...
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပသည်နွေ ဦး ရာသီတွင်အလှဆုံးဖြစ်သည်. တောင်ကုန်းများနှင့်လမ်းများသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အရောင်များဖြင့်တောက်ပနေသည်, ထောင့်တိုင်းကိုလှပသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပန်းချီကားများအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း. ပြင်သစ်ဥယျာဉ်မှသည်အင်္ဂလိပ်ပန်းဥယျာဉ်များနှင့်အီတလီအိမ်များဥယျာဉ်များအထိဖြစ်သည်, အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဥရောပ၌ဥယျာဉ်များပိုမိုများပြားသည်…
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ...
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ သင်သည်ဥရောပသို့သင်၏ပထမဆုံးခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်နေလျှင်, ကမ္ဘာပေါ်ရှိလှပသောမြို့ကြီးများအကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည့်အရာအနည်းငယ်ရှိသည်. ကျနော်တို့၏ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြပြီ 10 သင်ဥရောပ၌ရှောင်ရှားသင့်တယ်ခရီးသွားအမှားတွေ. တစ်ခရီး…
ရထားကိုစွန့်စားမှုပိုရရန် - ငွေရလွယ်ကူစေနိုင်ပုံ
အားဖြင့် Susan Doctor
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်ထူးကဲသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆုများစွာရနိုင်သည်. ရထားများကသင့်အားရှုခင်းနှင့်နီးကပ်စေသည်: အဲသိုးစု၏အလယ်ထိုင်ခုံမှ tulips တစ်ခု၏အနံ့ကိုသိုးများစားကျက်နေသည်သို့မဟုတ်ရှူရှိုက်နေသည်ကိုသင်မတွေ့ရပါ။. ရထား…
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, ရထားဘဏ္ဍာရေး, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောတောင်ထိပ်များ, blooming ချိုင့်, ရေတံခွန်များ, ရေကန်များ, နှင့်ကွဲပြားခြားနားတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်, ကမ္ဘာ့မမေ့နိုင်သောသဘာဝသယံဇာတများတည်ရှိရာဥရောပ၏အိမ်ဖြစ်သည်. နွေ ဦး ရာသီတွင်ပွင့်လန်းသောကြီးမားသောစိမ်းလန်းသောမြေများကိုဖြတ်သန်းခြင်း,5ဥရောပရှိအလှပဆုံးသဘာ ၀ သိုက်များမှာခရီးသွားများအတွက်ကြိုဆိုသည့်အမျိုးသားဥယျာဉ်များဖြစ်သည်…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ အကယ်၍ သင်ကောင်းစွာအစီအစဉ်ဆွဲလျှင်ဥရောပရှိမိသားစုအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်များသည်မိဘများနှင့်အသက်အရွယ်မရွေးကလေးများအတွက်အလွန်ပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်. ဥရောပသည်ရဲတိုက်နှင့်တံတားများ၏မြေဖြစ်သည်, စိမ်းလန်းစိုပြေသောပန်းခြံများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များနှင့်ယောက်ျားလေးများသည်မင်းသမီးလေးများအဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်သည်…
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ဥရောပရှိအလှပဆုံးရှုခင်းအချို့သည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်။ ရောက်ရှိရန်လွယ်ကူသည်. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကြိုတင်စီစဉ်မထားရင်ဥရောပခရီးစဉ်ကအတော်လေးစျေးကြီးနိုင်ပါတယ်. ဥရောပမြို့တော်အများစုကမင်းရဲ့ခရီးသွားလာရေးဘတ်ဂျက်ကိုတိုးချဲ့လိမ့်မယ်, နေရာအတော်များများရှိတယ်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ...
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဥရောပ၏သဘာဝနှင့်ရှုခင်းများကနတ်သမီးပုံပြင်များကိုလှုံဆော်ပေးခဲ့သည်. ကျယ်ပြန့်သောတိုင်းပြည်များသည်အံ့သြဖွယ်ရာအံ့ဖွယ်ရာအချို့ကို ဦး တည်စေသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတောင်တက်လမ်းကြောင်းများတည်ရှိသည်. ဟန်ဂေရီအတွက်ထူးခြားတဲ့ဂူ, ပြင်သစ်တွင်စိမ်းရေနှင့်အတူ Grand Canyon အ, သြစတြီးယားရှိရေခဲတောင်ပံများ, နှင့်…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား...
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ အစိမ်းရောင်ပန်းခြံများ, တောင်ပေါ်မှာတောင်တက်လမ်းကြောင်း, နှင့်အဆင်ပြေရာသီဥတုအိမ်ပြင်ပျော်စရာရှိခြင်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ကြသည်. ဥရောပရဲ့နာမည်ကြီးမြို့ကြီးတွေမှာအရာအားလုံးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ဥရောပကကမ်းလှမ်းထားတဲ့အပြင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသင်ကြိုးစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်. အမ်စတာဒမ်ရှိစက်ဘီးစီးခြင်းမှသည်မြူးနစ်တွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းအထိ, ဤ7အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ...
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ကျယ်ပြန့်သောဥရောပနိုင်ငံများသည်ဒဏ္legာရီများနှင့်နတ်သမီးပုံပြင်များ၏မူလအစဖြစ်သည်, ရှေးဟောင်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုစောင့်ရှောက်သောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းများနှင့်ကျေးရွာများ. အလယ်အလတ်နာမည်ကြီးမြို့ကြီးများနှင့်နီးစပ်သောသို့မဟုတ်ထုံးကျောက်တောင်များနောက်ကွယ်တွင်ပုန်းနေလိမ့်မည်, ဥရောပရှိပါ ၀ င်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကျေးရွာများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်….
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ...